बाटोमा भेटाएको पैसा टिप्नु शुभ की अशुभ ? मिल्छ यस्तो संकेत - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन्।
ज्योतिषशास्त्रले भने बाटोमा भेटिएको पैसाको कारण र संकेत बताएको छ । त्यसोभए बाटोमा पैसा भेटिए के हुनसक्छ त त्यसको मतलब ?
ज्योतिषका अनुसार सडक वा बाटोमा पैसा भेटियो भने यसको अर्थ तपाई निकै नै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यसका साथै यस्ता व्यक्तिलाई निकै मनकारी व्यक्तिको रुपमा मानिन्छ।
बाटोमा भेटिएका यी चीज नछुनुहोस्
कपाल : यदि तपाईले बाटो हिड्दै गर्दा कपालको पोके देख्नुभएको छ भने त्यसबाट जोगिएर हिड्नुहोला । किनकी शास्त्रले शरिरबाट झरेको कपाललाई पनि अपवित्र मान्छ ।